raspberrypi | Saturngod
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged raspberrypi on January 15, 2013 by saturngod. Build Media Center with Raspberry Pi
Leaveareply Raspberry Pi က S$45 လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Media Center တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ထက် ပိုကုန်ကျပါမယ်။
၁။ Raspberry Pi (S$48)
၂။ HDMI cable (S$3)
၃။ mini USB to (S$ 5)
၄။ USB Keyboard (S$18)
၅။3Heat Sink (S$15) ( Heat Sink မဝယ်ပဲ ပန်ကာဖွင့်ထားပေးရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် )
၆။ 8 GB SD card (S$13)
၈။ Network Cable
၉။ Wireless Router ( For Mobile Remote Control )
ဒီ ပစ္စည်းတွေ စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ S$ 102 ဖြစ်နေပါပြီ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Linux, raspberrypi, xbmc on November 24, 2012 by saturngod. Raspberyy Pi
5 Replies မနေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က Pi ကို Element 14 ကနေ ဝယ်လိုက်တာ ညနေ ၄ နာရီ ဝန်းကျင်ရောက်တော့ ရုံးကို ရောက်လာတယ်။ Shipping ကို ၁ ရက်လောက် ကြာမယ်ထင်တာ တော်တော်လေးကို မြန်တယ် ဆိုရမယ်။
Raspberry Pi တစ်လုံးကတော့ S$45 (without GST) ပါ။ GST ပါရင်တော့ S$48.15 လောက်ကျပါမယ်။
- raspberry pi 512 MB Model B (S$45)
- Keyboard (S$16.77)
- Mouse (S$9.11)
- Micro USB (S$4.47)
- HDMI cable (S$2.27)
စုစုပေါင်း $77.62 + S$ 5.43 (GST) = 83.05
အိမ်မှာ SD card ရှိထားပြီးသား ဖြစ်လို့ SD card ဝယ်ဖို့ မလိုပါ။ SD card က class 10 ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Linux, raspberrypi on November 22, 2012 by saturngod. Search for:
တိုင်းပြည်သာယာဝပြောဖို့ မင်းက မင်းလိုကျင့်ရမယ်.. ပြည်သူက ပြည်လိုကျင့်ရမယ်.. မင်းက မင်းလိုမကျင့်ရင်… ပြည်သူက ပြည်လို မကျင့်ရင် တိုင်းပြည် ပျက်စီးရတတ်တယ် — ကွန်ဖြူးရှပ် Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod